प्रत्येक दिन ३० करोड भारु कमाउने एसियाकै धनी मुकेश अम्बानीको खान्की कस्तो होला ?
आइतबार, २६ जेष्ठ, २०७६
एजेन्सी । एसियाकै धनी मुकेश अम्बानीको खान्की कस्तो होला ? प्रत्येक दिन ३० करोड भारु कमाउने विश्वकै ५० धनी व्यक्तिहरुको सुचीमा रहेका उनलाई साधारण खाना मनपर्छ ।
उनी स्पोर्टी खालका व्यक्ति हुन् । उनी शाकाहारी हुन् । जस्तोसुकै खाना उनको सामु राखिदिएपनि उनी मज्जाले खान्छन् । उनलाई होटमा बनेको होस् वा सडकमा बनेको होस् उनलाई स्वादिलो भए पुग्छ । ब्रेकफास्टमा उनी आँपको जुस खान रुचाउँछन् । लन्चमा सप, सलादहरु लिन उनी मन पराउँछन् । डिनरमा भने उनलाई रोटी, दाल भात र साँग अति मनपर्छ ।
उनलाई दक्षिण भारतीय र गुजराती खाना अत्याधिक मनपर्छ ।
उनको मनपर्ने ठाउँ माइसोर क्याफी हो जुन मतुंगामा रहेको छ । उनलाई इड्ली–साम्भर मनपर्छ । ताज कोबालामा पाइने स्वाती स्न्याक्स र चाट अति नै मनपर्छ ।
सन् १९७० को दशकमा उनी अमेरिका छदाँ शाकाहारी खानालाई विशेष महत्व दिने गरेका थिए । तर, अमेरिकनहरुले शाकाहारी हुनुलाई खासै विशेष नमान्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।